नेपालले कसरी टि-२० विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्छ ? पढ्नुहाेस् – Vision Khabar
नेपालले कसरी टि-२० विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्छ ? पढ्नुहाेस्
। १७ भाद्र २०७५, आईतवार २०:४९ मा प्रकाशित
काठमाण्डाै । २०२० मा हुने टि-२० क्रिकेट विश्वकपमा स्थान बनाउन नेपालले विभिन्न छनोट प्रतियोगिता खेल्नु पर्नेछ । टेस्ट मान्यताका टप १० देशले सोझै विश्वकपमा स्थान पक्का गर्नेछन भने अन्य देशले छनोट प्रतियोगिता खेल्नु पर्नेछ ।
एसिया, युरोप, अमेरीका, अफ्रीका र इस्ट एसिया प्यासिफिक बाट विभिन्न ६२ देशले रिजिनल छनोट खेल खेल्नेछन जसमा एसियाबाट २, युरोपबाट १, अमेरीकाबाट २, अफ्रीकाबाट २ र इस्ट एसिया प्यासिफिक बाट १ गरी ८ देश र टि-२० अन्तरास्ट्रिय बरियतामा ११ देखी १६ औ सम्म परेका ६ देशसग विश्वकप छनोट खेल्नेछन् । १४ देशको छनोट खेल हुनेछ जसमा जम्मा ६ देशले विश्वकपमा स्थान पक्का गर्नेछन् ।
हेरौ नेपालले कसरी विश्वकपमा स्थान बनाउन सक्छ ।
नेपालले सुरुमा एसियाबाट रिजिनल छनोट खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ । अक्टोबर ३ बाट सुरु हुने पुर्विय एसिया छनोटमा नेपाल सहित मलेसिया, सिङगापुर, भुटान, चिन, म्यानमार र थाइलेण्ड रहेका छन् । जसबाट नेपाल यदि विजेता, उपिवजेता वा तेस्राे स्थान अाएमा र पश्चिमबाट छनोट भएका युएइ, कतार र कुबेत गरी ६ देशबिच हुने एसिया रिजिनल छनोट खेल खेल्नेछ ।
एसिया रिजिनल छनोट खेलबाट नेपाल विजेता वा उपविजेता भएमा ग्लोवल छनोट खेलका लागी छानिनेछ र १४ देशकाे ग्लोवल छनोट खेलहरु हुनेछ त्यसमा अन्तिम ६ मा अाउन सकेमा नेपालले २०२० काे टि-२० क्रिकेट विश्वकपमा स्थान बनाउने छ ।